Kutshanje, amaxabiso eemveliso ezinxulumene nekhonkco loshishino lweekhemikhali ze-phosphorus ziye zaqhubeka nokunyuka. Ngokutsho kwedatha ekhutshwe ngu-Baichuan Yingfu, i-arhente yokubonisana nempahla, isicatshulwa se-phosphorus ephuzi ngoSeptemba 15 yayiyi-60082 yuan / ton, eyayimi kwinqanaba elipheleleyo ...
500kg iipilisi zeClo2 simahla eFELIXSTOWE Port of UK
Ngoku sine-500kg ye-chlorine dioxide tablets (1g/tablet) e-FELIXSTOWE Port of UK. Ngenxa yokuba umthengi akafumaneki ngoku (akakwazi ukugqiba naye iinyanga ezininzi), ngoku sifuna ukuyinika abanye abathengi simahla. Ukuba nabani na onomdla, nceda uqhagamshelane nathi ngokukhawuleza nge-imeyile...
Ukulungiswa kweprocaine kunye neprocaine hcl
Isiseko se-Procaine CAS: 59-46-1 Imbonakalo: i-crystalline powder emhlophe Indawo yokunyibilikisa (indawo ebilayo): 59 ~ 62 ℃ Ifomula yemolekyuli: c13h2on2o2 Ubunzima bemolekyuli: 236.31 Procaine hcl CAS: 51-05-8 Imbonakalo: icrystalline powder emhlophe okanye ikristale emhlophe indawo (indawo ebilayo): 154 ℃ ~ 157 ℃ imo yemolekyuli...
Izongezelelo zokukhuthaza ukulala kweMelatonin
Umsebenzi owaziwayo we-melatonin kukuphucula umgangatho wokulala (idosi ye-0.1 ~ 0.3mg), ukunciphisa ixesha lokuvuka kunye nexesha lokulala ngaphambi kokulala, ukuphucula umgangatho wokulala, ukunciphisa kakhulu inani lokuvuswa ngexesha lokulala, ukunciphisa inqanaba lokulala, ukwandisa ixesha elide. inqanaba lokulala okunzulu, kunye nezantsi ...
I-Dragon Boat Festival-Ndikunqwenelela impilo entle!
ngu admin nge 21-06-09
I-Dragon Boat Festival iya kuqala ukusuka kulo Mgqibelo kwaye ithathe iintsuku ezi-3 ukuya kutsho ngoMvulo. Siza kuqala ukusebenza ngoLwesibini emva kweeholide. Sikunqwenelela konke okuhle empilweni! Iiholide ngonyaka ka-2021. 1, Usuku loNyaka oMtsha: NgoJanuwari 1-3, 2021 2, uMnyhadala weNtwasahlobo: Februar...
Umgca omtsha wokuvelisa isiseko seprocaine kunye ne-cas 59-46-1
I-Hebei Guanlang Biotechnology Co., Ltd. yasekwa ngo-2007, ehlala kwisixeko sase-Shijiazhuang esilikomkhulu lePhondo le-Hebei kunye necandelo le-hub phakathi kwe-Beijing Tianjin kunye ne-Hebei kwaye inenzuzo yokuhamba kakuhle. Inkampani yethu lishishini lale mihla leekhemikhali ezikumgangatho ophezulu kunye noPhando kunye no...